Hal ciyaaryahan oo sabab u ah in xiddigaha Manchester United ay saxiixi waayaan heshiisyo cusub! – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Hal ciyaaryahan oo sabab u ah in xiddigaha Manchester United ay saxiixi waayaan heshiisyo cusub!
Axad, November, 4, 2018(HNN) Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa sabab u noqon kara in xiddigaha muhiimka ah ee kooxda ay diideen inay qalinka dul dhigaan heshiisyo cusub, maadaama mushaarkiisa uu yahay mid ay bartilmaameedsanayaan xiddigaha.
Isku dayada ay sameyneyo United isla markaasna ay ku dooneyso inay heshiis cusub kaga saxiixdo Anthony Martial iyo David De Gea waxaa caqabad ku ah wakiillada xiddigahan oo wada xaajoodka saldhig uga dhigaya mushaaraad fara badan.
Xiddigga reer Chile ayaa £400,000 toddobaadkii mushaar ahaan uga qaata Old Trafford, ka dib markii uu laacibkan kasoo jeestay u dhaqaaqidda Manchester City oo iska diidday inay mushaarkaas bixiyaan.
Waxaa sidoo kale intaas u raacsan lacago kale oo ay ku jirto £75,000 oo uu kullan walba oo uu ciyaaro ku qaato.
Goolhaye David De Gea ayaa quursanaya heshiiska United ay usoo bandhigeyso laacibkan ee ku kacaya £300,000 toddobaadkii.
27-jirkan ayaa £175,000 toddobaadkii ka qaata garoonka Masraxa Riyooyinka garoonka, iyadoo la filayay inuu xagaagii heshiis cusub saxiixo.
Sidoo kale waxaa ay calaamad su’aal dul saarrantahay mustabalka Martial, kaasoo durba diiday qandaraaskiisii ugu horreeyay ee ay usoo bandhigtay Red Devils.
Waxaa xusid mudan in labadan xiddigba uu qandaraaskoodu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo ay kooxda Manchester United u furantahay inay hal sano ugu kordhiso isla markaasna ay gaarsiiso 2020.
22-jirkan ayaa ka dhiidhinaya heshiiska United ay soo bandhigtay ee ay ku laba-llaabeyso mushaarkiisa oo ah £70,000.
Hal ciyaaryahan oo sabab u ah in xiddigaha Manchester United ay saxiixi waayaan heshiisyo cusub! added by admin on 04/11/2018